एउटा अनाथ बालक जो आफ्नै पौरख र कडा संघर्षबाट रुसकै सर्वाधिक शक्तिशाली कुलीन वर्गमा दरिए । सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, ४९ वर्षीय रोमन अब्रामोभिच सानै उमेरमा अनाथ भएर पनि अर्बपति बनेका छन् । लिथुआनियामा यहुदी आमाबुबा इरिना र अर्काडीबाट जन्मेको उनी चार वर्षका छँदा टुहुरो भए । हजुरबुबा र हजुरआमा पर्नेले उनको पालनपोषण … Read more
जरिवाना के कस्तो काममा गल्ती गर्नाले हुन्छ ? अमेरिकामा एकजना चर्चित गायकलाई सेक्समा गरिएको गल्ती निकै महंगो परेको छ । जसका कारण उनले ११ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ । ८ पटकका ग्रामी अवार्ड विजेता रहेका चर्चित गायक अशरले उनीसँग सम्भोग गरेकी महिलालाई रोग सारेको प्रमाणित … Read more
पाकिस्तानको मुल्तानमा एक किशोरीमाथि बलात्कारको आदेश दिएको आरोपमा २० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । युवतीको दाइले एउटी बालिकामाथि बलात्कार गरेका थिए, र त्यसैको बदलास्वरुप पञ्चायतले यो आदेश दिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार दुवै पीडितका परिवार नातेदार हुन् । दुवै परिवारका व्यक्तिहरुले मिलेर यो आदेश दिएको बताइएको छ । प्रहरी अधिकृत अल्लाह बख्सले भने, … Read more
फरक गर्ने धूनमा मानिसहरु अहिले जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्न पनि अनौठा तरिकाहरु खोज्न थालेका छन् । यस्तैमा एकजना बुवाले आफ्नी छोरीको बर्थडे विश गर्नका लागि अपनाएको तरिका अहिले निकै भाइरल बनिरहेको छ । हो, अहिले सोसल मिडियामा जोए पेलेट र उनकी छोरी रेलिन पेलेट चर्चामा छन् । नहोउन् पनि किन ? आखिर जोएले हालै आफ्नी … Read more
भित्री बस्त्र नलगाएका कारण नोकरीबाट निस्कासित
नोकरीबाट निकालिनुका धेरै गम्भीर कारणहरु त तपाई हामीले सुनेकै छौं । के तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि भित्री बस्त्र (ब्रा) नलगाएर अफिस गएकै कारण कसैलाई नोकरीबाट निकालिन्छ भनेर ? यस्तै एक अजीब घटना बेलायतमा भएको छ । एक बारमा काम गर्ने २२ वर्षीया युवती केट हनाले ब्रा नलाएर काममा गएकै कारण जागिर गुमाउनु परेको बताएकी … Read more
घुमफिरका शोखिन मानिसहरुले घुमफिर गर्नका लागि विदा लिने क्रममा आफ्नो जागिरको समेत परवाह गर्दैनन् । हाकिमले विदा दिने छाँट देखाएन भने जागिर नै छाडिदिन पछि पर्दैनन् । नर्थ आयरल्याण्डका एक युवक ३३ वर्षका जोनी वार्ड पनि यस्तै दुनिया दर्शनका शौखिन थिए । उनलाई पूरै दुनिया घुम्नु र देख्नु थियो । चाहना मात्र भएर के गर्नु … Read more
माकुरा हाम्रो वरिपरि जताततै छन्। माकुराको भोक पनि अनौठो हुने गर्छ। केही ठूला प्रजातिका माकुराले छेपारो, चरा र सानातिना स्तनधारी जनावर पनि खाने गरेको पाइन्छ। माकुराको भोकको यस्तै प्रकृतिलाई देखेर दुई युरोपेली बायोलोजिस्टले हालै एक अनुसन्धान गरेका छन्ः पृथ्वीमा भएका सारा माकुराले एक वर्षमा खाने खानाको तौल कति होला? मार्टिन नेफ्लर र क्लाउस बर्कहोफरले मार्च … Read more
हवाइजहाज सम्बन्धी केही राेचक जानकारी
हवाईजहाज स्थिर पखेटा (फिक्स विङ्ग)सहितको एयरक्राफ्ट (हवाइ यन्त्र) हो । यसले इञ्जिनको सहायताबाट हावामा उडान गर्छ । हवाईजहाजको प्रयोग विशेषगरी यातायातको साधनका रूपमा गरिन्छ । साथै, विभिन्न खोजमूलक कार्य, सैनिक गतिविधि तथा मनोरञ्जनका लागि समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । हवाई जहाजमा रहेको इञ्जिनले यसलाई अगाडि बढ्न आवश्यक शक्ति प्रदान गर्छ । त्यसैगरी यसमा रहेको पखेटाले … Read more
अष्ट्रियाको भियनामा संसारकै पहिलो सेक्स विद्यालय खोलिएको छ । विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई असल र राम्रा प्रेमी बन्न सिकाउने दावी गरेको छ । तर, विद्यालयमा भर्ना हुनको लागि विद्यार्थीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी बराबर १४०० पाउण्ड अर्थात् १ लाख ७२ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीडेनमा … Read more
यदि तपाइाको अगाडि टेबुलमा कसैले दुनियाकै सबैभन्दा लामो पिज्जा ल्याएर राखिदियो भने सुरुमा त त्यसको फोटो खिचिहाल्नुहुन्छ होला । अनिमात्र त्यसलाई खाने बारेमा सोाच्नुहुन्छ । अमेरिकाको लस एन्जल्समा विश्वकै सबैभन्दा लामो पिज्जा तयार पारिएको छ । उक्त पिज्जाको लम्बाई २ किलोमिटर छ । गत वर्ष इटालीमा तयार पारिएको लामो पिज्जाको रेकर्ड तोड्दै अमेरिकी पिज्जाले आफ्नो … Read more